'सिधे नुन' खादाँ हुन्छन् यस्ता फाइदा ! थाहापाउनुहोस् - Abhiyan news
‘सिधे नुन’ खादाँ हुन्छन् यस्ता फाइदा ! थाहापाउनुहोस्
५ पुष २०७८, सोमबार १२:२२ news DMLeaveaComment on ‘सिधे नुन’ खादाँ हुन्छन् यस्ता फाइदा ! थाहापाउनुहोस्
सिधे नुन कमै मानिसले खाने गर्छन् र यसको फाइदा पनि कमैलाई मात्रा थाहा होला। हामीले दैनिक खाने खानामा नुन नभए बेस्वादिलो हुन्छ ।
खानामा नुन बढी वा कम भए खानाको स्वाद नै बिग्रन्छ । त्यसैले खानामा नुनको महत्वपूर्ण स्थान छ ।खानामा प्रयोग हुने र बिहान बेलुकै खाइने नुनले स्वास्थ्यमा पुर्याउने लाभहानी बारे हामीले जानकारी राख्नु जरुरी छ ।
हामीले भोजनमा प्रायः जसो सेतो वा आयोडिन नुनको प्रयोग गर्छौं ।सेतो नुनको अत्यधिक प्रयोगले हाम्रो स्वास्थ्यलाई नराम्रो असर पनि पर्न सक्छ । हामीले सेतो नुनको साटो सिधे नुनको प्रयोग गर्न सक्छौं । सिधे नुन हल्का खैरो रंगको हुन्छ ।
सिधे नुनको सेवन गर्नाले हाम्रो शरीरलाई धेरै फाइदा गर्ने गर्छ । हामी आज हजुरहरुलाई सिधे नुनकोबारेमा जानकरी दिन गइरहेका छौ । सिधे नुनको रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड हो ।
आयोडिनयुक्त नुन जस्तै सिधे नुन धेरैजसो व्रत बस्ने क्रममा प्रयोग हुनेगर्छ । यो प्रशोधन नगरिएको हुँदा यसमा रहेको पोषक तत्व जस्ताको तस्तै प्राप्त हुन्छ ।
सिधे नुनमा सल्फर, पोटासियम, क्याल्सियम आइरनलगायतका शरीरलाई आवश्यक पर्ने खनिज तत्व प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ । यसकासाथै यसमा ९० प्रतिशत मिनरल हुन्छ ।
सिधे नुनका यस्ता छन् फाइदाहरु
सिधे नुनले अनिन्द्रा, अस्थामा, मधुमेह, पथ्थरी, मोटोपन, खराब कोलेस्ट्रोल, श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्याबाट बचाउने काम गर्छ । त्यस्तै, यसको नियमित सेवनले आर्थराइटिस, प्यारालाइसिस, एनिमिया, रक्तश्राव, कपाल झर्ने, जोर्नी दुख्ने र आन्द्रासम्बन्धी समस्या पनि नियन्त्रण हुन्छ । त्यस्तै, छालालाई नरम, स्वस्थ, सुन्दर राख्न पनि मद्दत गर्छ ।
-उच्च रक्तचाप नियन्त्रित हुन्छ
-मुटुका रोगहरुबाट बचाउँछ
-पाचन र तौल घटाउनका सहयोग पुर्याउने
-यसले पाचन रस बनाउने हुनाले कब्जियतबाट राहत पाउन मद्दत पुर्‍याउँछ
-कोलेस्ट्रोल कम गर्न पनि सहयोग पुर्‍याउँछ
-शरीरमा सेरोटोनिन र मेलाटोनिन हर्मोनको स्तर कायम गर्छ, तनाव कम गर्छ
-मांसपेशी दुखाई वा हड्डीहरूसम्बन्धी कुनै समस्या कम गर्छ
-हृदयघातको सम्भावना कम गर्छ
-शरीरमा चिनीको मात्रा नियन्त्रण गरी मधुमेह हुनबाट बचाउँछ
– छाला र दन्त रोगहरूमा फाइदाजनक
क्रिकेट रङगशाला निर्माणबाट पछि हटे धुमुर्स–सुन्तली ! स्वामित्व लिन भरतपुर महानगरपालिका तयार
ओलीलाई ‘सेटिङ’मार्फत बचाइएको प्रचण्डको दाबी
४ कार्तिक २०७८, बिहीबार ०३:५६ अभियान न्यूज
२२ श्रावण २०७८, शुक्रबार ०२:३५ अभियान न्यूज
पहिलो पटक यौनसम्पर्क गर्ने उचित उमेर कुन हो? थाहा पाउनुहोस
२० श्रावण २०७८, बुधबार ०३:४९ अभियान न्यूज